Izimpawu Zokukhulelwa Ngesonto, Ukukhulelwa Kwamazibulo, Amavidiyo
Amaviki angu-2 akhulelwe
Amaviki angu-8 akhulelwe
Amaviki angu-12 akhulelwe
Amaviki angu-16 akhulelwe
Ukukhulelwa Q no-A
Iviki lokukhulelwa ngeviki
Ukukhulelwa kwama-pregnancy nokukhulelwa kwamavidiyo
Siyakwamukela emhlabeni wesisu esikhulelwe! Sithi ngokumomotheka ngoba kungomunye wezinto eziningi ozothola ukuzenza phakathi nesonto lakho lokukhulelwa ngesonto. Ukukhulelwa kungaba yisikhathi esithakazelisayo kakhulu ekuphileni komfazi, kodwa futhi kugcwele imibuzo nokukhathazeka. Njengoba ukukhulelwa kuvela, kungenzeka ukuthi ungazi ukuthi ungalindela isonto ngalinye futhi unelukuluku mayelana nokukhulelwa izimpawu ngesonto ngesonto. Singasiza.
Kulabo abazibuza ngosuku lwakho olufanele, sinikeza ukubala kweviki lokukhulelwa ngosuku olufanele, okusiza okuningi. Siphinde sinikeze imfundo yokuthi singakanani usuku lwakho olufanele. Hlola emuva kaningi ukuze uhlale unolwazi mayelana nezimpawu zakho zokukhulelwa ngesonto. Vakashela isigaba sethu se-Q futhi A ukubuza umbuzo bese ufunda izimpendulo. Sigcine esivumelwaneni sakho phakathi nesonto lakho lokukhulelwa ngesonto. Ingabe uhlangabezana nezimpawu ezivamile, ezingavamile? Yimuphi umbuzo wokukhathazeka mayelana nokukhulelwa kwakho okusha? Asibona uDkt kodwa ulwazi lwethu lungasiza. Singasiza ukucacisa ukuthi izimpawu zakho zokukhulelwa isonto ngesonto zivamile ngesikhathi sakho sokukhulelwa. Futhi, kungcono uma wazi ukuthi ungalindela isonto ngalinye. Sinikeza isonto ngesonto ulwazi, ukuqala izimpawu zokukhulelwa isonto 1. Ziyini izimpawu zokukhulelwa ngeviki 2, ngeviki 5, njll Kukhona isonto ngesonto lokukhulelwa kokubala, kanye nekhalenda ukuhlola umzimba wakho nomntanakho ngalokhu okuphawulekayo
Ukukhulelwa kweVidiyo yevidiyo
Iviki 1 -Iviki 2 -Iviki 3 – Iviki 4 -Iviki 5 – Iviki 6 – Iviki 7-Iviki 8 -Iviki 9 – Iviki 10 – Iviki 11 -Iviki 12 – Iviki 13 – Iviki 14 – Iviki 15 -Iviki 16 – Iviki 17 – Iviki 18 -Iviki 19 -Iviki 20 – Iviki 21 – Iviki 22 -Iviki 23 – Iviki 24 – Iviki 25 Iviki 26 -Iviki 27 – Iviki 28 – Iviki 29 – Iviki 30 – Iviki 31 -Iviki 32 – Iviki 33 – Iviki 34 – Iviki 35 -Iviki 36 – Iviki 37 - Iviki 38 – Iviki 39 – Iviki 40
Lapho singakwazi khona, sihlinzeka ngokufanelekile amavidiyo wokukhulelwa kanjalo. Sibheke ngokuyinhloko ulwazi oluhlobene nempilo kanye nokunikeza amathiphu nokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa ngesonto, njengokuthi ividiyo ixhumanisa ngenhla. Baziswa kuwe I-Consumer Health Digest. Siyakhula nakuba, futhi ividiyo iphinde iqale phansi kwekhasi ngezansi ixoxa ngokuthenga ingane. Sizofaka izethulo njalo mayelana nokuthenga ingane, ukubhalisa isipho, ngisho nemibono yokugeza yezingane.
Kodwa ingabe enye iwebhusayithi idinga ulwazi oluthe xaxa mayelana nokukhulelwa? Sicabanga kanjalo! Ngesinye, ukubala kweviki lokukhulelwa kuzokusiza ukubala usuku lwakho olufanele. Mhlawumbe unemibuzo yokuqala kulokhu: Yiziphi izimpawu zokukhulelwa ngesonto ngesonto? Yiziphi ezinye zakuqala kakhulu izimpawu zokuxwayisa zokukhulelwa? Ngingazi kanjani ukuthi ngikhulelwe, noma ukuhlolwa kokukhulelwa kunembile, noma ukuthi ungakhetha kanjani kanye nodokotela wezidakamizwa. Mhlawumbe unemibuzo ngama-STD nokukhulelwa noma ukuzivocavoca ngenkathi ukhulelwe. Yiziphi izinyanga ezihlukene, kanye nezimpawu zokukhulelwa ngesonto ngesikhathi ngasinye. Mhlawumbe uzibuza ngesondlo sokubeletha, ifomula lebantwana, njll. Ngomshini wokubala weviki lokukhulelwa kanye nolunye ulwazi kusayithi lethu, Ukukhulelwa ngeviki, sihlose ukuphendula le mibuzo nokunye okuningi! Simboza ukukhulelwa kwakho ngendlela ehambisanayo, ngesikhathi esisekelwe, phakathi nesonto lakho lokukhulelwa ngesonto, trimester kuya trimester. Siyakukufihla ngaphambili ngolwazi nezeluleko ngaphambi kokukhulelwa, izinto okufanele uzicabangele ngaphambi kokuba ukhulelwe. Senza isinyathelo esisodwa ngokuqhubekayo, sixoxa ngokulethwa nokukhulisa ingane enempilo ezweni lanamuhla. Ngentuthuko eqhubekayo, isibalo sokukhulelwa kweviki lokukhulelwa ngosuku olufanele sizohlinzeka ngolwazi olunembile. Uzokwazi ukusesha ngosuku lokugcina kwakho kanye nosuku lwakho lokukhulelwa. Kuzobe kube nezindlela eziphambili kakhulu zokubala izimpawu zakho zokukhulelwa ngesonto.
Njengoba sishilo sizobe sinezela okuthunyelwe njalo mayelana nokuthengwa kwezingane, ukubhalisa kwesipho, ngisho nemibono yokugeza yezingane. Hlala ubukele! Akukho okuqhathaniswa nesimangaliso nemilingo yokukhulelwa. kuyithuba lakho lokubandakanya inqubo enkulu yokudala yokuphila. Ukuhlela phambili kulolu phiko kungathuthukisa amathuba akho okukwenza kahle wena nomntanakho. Kungasiza ukuthola noma ukunciphisa ezinye izimpawu zokukhulelwa. Indlela yakho yokuphila ithinta impilo yengane yakho, kodwa ingathinta futhi izimpawu zokukhulelwa ngesonto ngesonto. Ngokuhlela phambili ngeviki lakho lokukhulelwa ngesonto, uqinisekisa wena nomntanakho ukuthi ubonakale ezintweni ezinhle futhi ugweme izinto ezilimazayo ngesikhathi ukhulelwe. Ngesikhathi abesifazane abaningi beqaphela ukuthi bakhulelwe bahlala ezinyangeni ezimbili ukuya kokukhulelwa. Ngesikhathi bebona udokotela wabo, bahamba ngezinyanga ezimbili noma ezintathu. Yingakho ukulandelela izimpawu zokukhulelwa ngesonto kuyisihluthulelo. Amaviki okuqala e-12 wokukhulelwa kubaluleke kakhulu ngoba lokhu kungukuthi ingane yakha izinhlelo zayo ezinkulu zomzimba. Izinto eziningi ezibalulekile zingenzeka ngaphambi kokuba uqaphele ukhulelwe wakho noma ubone udokotela wakho. Ukuba nesimo sokukhulelwa kusho ukulungiswa ngokomzimba nangokwengqondo. Uzobhekana nezinguquko ezinkulu phakathi nenkathi yokukhulelwa kwakho. Ukuba nempilo enhle ejwayelekile ngaphambi kokukhulelwa kungakusiza ukuba ubhekane nokucindezeleka ngokomzimba nangokomzwelo kokukhulelwa, abasebenzi nokudiliva. Kuzokusiza ukuba ulungiselele ukunakekela ingane esanda kuzalwa. Sikusiza ukuthi ubone izimpawu zakho zokukhulelwa ngesonto. Nge-calculator yesonto lokukhulelwa kanye nolwazi oluhlobene nebhulogi, uzobe ulungele ngokugcwele.
Hlola indawo yethu ngezilimi ezahlukene, usebenzisa ukuhamba ngakwesokudla ngakwesokudla. Futhi, sicela ukhululeke ukuphawula ngeviki lakho lokukhulelwa ngesonto, izimpawu, okuhlangenwe nakho, njll Buyela maduze!
Izigaba Khetha Category Amaviki angu-12 akhulelwe Amaviki e-16 Izimpawu ezikhulelwe Amaviki angu-18 akhulelwe Amaviki e-2 Izimpawu ezikhulelwe Amaviki e-8 Izimpawu ezikhulelwe Ukuphuza ukukhulelwa Izimpawu Zokuqala Zokukhulelwa Ukukhulelwa Okunempilo Ukukhulelwa kwe-Molar Ukugula kwasekuseni ukukhulelwa Ukukhulelwa kokukhulelwa Izimpawu Zokukhulelwa Iviki lokuVumbulula amaVeki ngesonto Ukukhulelwa kweTubal
Asibona odokotela nolwazi kule webhusayithi akuyona iseluleko sezokwelapha. Senza imizamo yethu yokuhlinzeka ngolwazi olunembile kodwa asiqinisekisi. Siyanxusa ukuba ufune iseluleko sezokwelapha esivela kuDokotela noma u-OBGYN.
Siyabonga ngokuhlola ibhulogi lokukhulelwa ngeviki. Isihloko sesayithi siyi ukukhulelwa isonto nesonto. Sinikeza izimpawu zokukhulelwa isonto ngesonto, kanye nolwazi oluhlobene, kusukela ekuqaleni kokukhulelwa ngesikhathi sokubeletha.
Ukukhulelwa kweviki levidiyo 40
Ukukhulelwa kweviki levidiyo 39
Ukukhulelwa kweviki levidiyo 38
Ukukhulelwa kweviki levidiyo 37
Ukukhulelwa kweviki levidiyo 36
I-Copyright © Wonke amalungelo agodliwe. Ukuziphendulela: Asibona odokotela nolwazi kule webhusayithi akuyona iseluleko sezokwelapha. Senza imizamo yethu yokuhlinzeka ngolwazi olunembile kodwa asiqinisekisi. Siyanxusa ukuba ufune iseluleko sezokwelapha esivela kuDokotela noma u-OBGYN.